Sinaanta Jinsiga ee Farshaxanka Farshaxanka: Shaqada Horumarka
Waxaan u imid deeq-shaqaale ka dib muddo toban sano ah oo ah agaasimaha fulinta ee ururada dhaqanka-qaaska ah. Waxaan fahamsanahay in marka lagu daro halganka guud in uu ku soo hagaago farshaxanka farshaxanka iyo ururada farshaxanka, farshaxanada midabada iyo farshaxanka farshaxan oo ay aasaaseen oo ay hogaamiyeen dadka midabka gaar ahaan halganka in ay lahaadaan meel ay ku soo saaraan oo ay qabtaan shaqadooda; in la kashifo si loo xakameeyo jihada ama wax soo saarka shaqadooda; halganka si loo helo sawirro wanaagsan iyo kalkaaliyado kale oo ka soo jeeda dhaqankooda; halganka si looga baxo wada hadallada kala duwanaanshaha iyo ka mid noqoshada in ay ka soo qaybgalaan hawsha qoto dheer ee kobcinta iyo hormarinta jimicsigooda; halganka heysashada ilaha si loo dhiso, u ilaaliyo, u helo, iyo loo qaybiyo kamarado farshaxan oo kale; halgan si ay u sahamiyaan oo ay si buuxda u matalaan aqoonsiyada farshaxanimada ee culus; halganka in lagu qiimeeyo shaqadooda dhismaha beesha dhexdeeda iyadoo loo eegayo mudnaanta iyo kor u qaadida shakhsiga; in la helo taageero bulsho oo ku filan oo ka baxsan munaasabadaha mudada gaaban iyo barnaamijyada sanadlaha ah si loo helo taageero muddo dheer ah hawlgallada guud ee joogtada ah. Liiska ayaa sii socon kara.
Waan ogahay in fannaanyahanadan iyo ururada farshaxanku aysan la tacaalin sababtoo ah ma awoodaan. Waxay ku dhibtoodaan sababtoo ah khayraadka iyo fursadaha qaabdhaqan ahaan iyo nidaam ahaanba loo diido iyaga. Inta badan maaha, farshaxanada midabada iyo ururada farshaxan ee ay abuureen oo ay hoggaamiyeen dadka midabka leh ma helayaan ilaha ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan, u daba joogaan inay koraan.
Cilmi-baaris ayaa muujisay farqiga u dhexeeya Farshaxanka Farshaxanka
Cilmi-baadhistu waa qiimeyn. Sanadkii 2011, Guddiga Qaran ee Fadilcelinta Masuulka ah ayaa daabacay Faus Faus, Dhaqanka iyo Isbeddelka Bulshada. Warbixinta, cilmibaadheere Holly Sidford wuxuu helay 55% maalgalinta farshaxanka (lacagaha, deeqda, iyo deeqaha) wuxuu taageeraa ururada waaweyn oo leh miisaaniyad ka badan $ 5 milyan. Taas macnaheedu waa in ka yar 2% ee caalamka ee farshaxanka iyo dhaqanka aan faa'iido doonka helin in ka badan kala badh dakhliga guud ee qaybta. Maadaama machadka DeVos uu soo sheegay 2015 daraasad ku saabsan Kala duwanaanshaha Farshaxanka, "... 20ka hay'adood ee ugu waawayn ee waawayn ayaa leh miisaaniyad dhexdhexaad ah oo ah $ 61 milyan; 20 urur ee ugu weyn ee midabka ayaa leh cabbirka miisaaniyadda dhexe ee $ 3.8 milyan. "Farqiga 16ka jeer ee cabbirka miisaaniyadda ayaa ah mid muujinaysa farqiga u dhexeeya.
Haddii aynaan wax ka qabannin su'aalaha waaweyn ee sida iyo sababta ay u kala duwan yihiin, waxay sii wadi doonaan. Haddii aynaan wax ka hadlin jinsiyadda, xaqiiqada ah midab-takoorka, iyo kaalinta abuuritaanka kala-guurka, waxay sii wadi doonaan. Marka la eego sinnaan la'aanta taariikhiga ah iyo isbedelka naafanimada, kor u qaadida maalgalinta farshaxanka kali maaha wax ka qabta arimaha dhismaha ee saameynaya sida loo mideeyo lacagtaas. Waa inaan bedelnaa maskaxda (hoggaamin iyo go'aan qaadashada) iyo qaababka (siyaasadaha iyo nidaamyada hay'adaha) ee ka hortagaya qaybinta sinnaanta ee sahayda. Tani waa shaqada sinnaanta.
Philanthropy waa isbedel bulsho. Suurtagalnimada in aan ka qaybqaato wakiil ah isbeddel ayaa i soo jiitay meeshan. Laga soo bilaabo halkan waxaan arkayaa laba waddo, labadaba waa lagama maarmaan: 1) Isbedelada nidaamyada jira si ay u noqdaan kuwa u siman iyo 2) Inay dejiyaan oo ay kobciyaan waxyaabo cusub oo loo qaybiyo khayraadka.
Maaliyadaha Farshaxanka ah ee la socda Wadajirka si loo Caawiyo Midabtakoorka
Waan ku faraxsanahay inaanan ka soo bilaabin xoqan. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa hoggaaminta Grantmakers ee farshaxanka (GIA), hay'adda adeegga qaran ee maalgelinta farshaxanka ay hoggaaminayaan guddi kala duwan iyo horumarineed. Waxaan ka mahadcelinayaa balanqaad cad oo uu ururkani ka dhigayo horumarinta sinnaanta jinsiyadeed sida ku xusan Sinnaanta Racial ee Farshaxanka Farshaxanka ee Ujeedada. Xubin cusub oo guddi ah, waxaa la iiga baahnaa inaan kaqeyb galo tababar xoogan oo kusaabsan midab kala sooca qaab dhismeedka taasoo noqotay iskudarsiga falanqaynta ugu badan ee cunsuriyada Mareykanka iyo soo bandhigida istiraatiijiyado abaabul cunsuriyada ladagaalanka oo waligey aan kamid ahaa. Sannadkan, GIA waxay sameyneysaa dib-u-eegis sinnaan midab-kala-sooc ah oo ku saabsan dhaqamadeeda iyo barnaamijyadeeda iyada oo ujeedadu tahay kordhinta awooddeeda ay ku taageerto ururada xubinta ka ah shaqada la midka ah.
Halkan Minnesota gudaheeda, waxaan sidoo kale ku faraxsanahay in aanan qasab ahayn inaan keligaa ku socdo. Ku dhawaad seddex sano, maalgeliyeyaal farshaxan oo ka socda Xarunta McKnight Foundation, Jerome Foundation, Bush Foundation, Minnesota Partners Philanthropy Partners, Guddiga Fanka ee Gobolka Minnesota, iyo Sanduuqa Kaalmada Musuqmaasuqa (Unfofits Assistance Fund) ayaa abuuray istiraatiijiyada Sinnaanta ee Iskaashatada Iskuduwaha si loo horumariyo istaraatiijiyado isku dhafan oo lagu hormarinayo sinaanta sinaanta sida warfidiyeenada farshaxanka iyo ururada farshaxanka iyo dhaqamada ee bulshooyinkeena. Kooxdu waxay horumarisay bulsho waxbarasho, labadii sano ee la soo dhaafay waxay ka qaybgaleen sheekooyin iyo tababaro, xafladaha martigelinta ee deeq bixiyeyaasha, waxay bilaabeen wada sheekeysiyo raadinta oo ay la yeeshaan farshaxanada iyo ururada farshaxanka kuwaas oo ka shaqeynaya sidii loo bedeli lahaa nidaamyada jira iyo horumarinta waxyaabo kale, taageero siinta dadaallada cusub ee sinnaanta la xidhiidha farshaxanka.
Agenda Learning for Barnaamijka Farshaxanka McKnight
At The McKnight Foundation, waan ku qanacsanahay inaan ku darno tixraac jinsi iyo dhaqan ahaanba 2015-2017 Qaab-dhismeedka istaraatiijiga ah. Ururku wuxuu ka hadlayey ballanqaadkii: "Ka wada shaqeeynta beelaha iyo qeybaha kala duwan si loo baabi'iyo dhaqanka dhaqaale, dhaqaale, iyo caqabadaha is haysta si loo wadaago ladnaanta. Dhaqaalaha bulshada iyo dhaqaalaha ee gobolka Minnesota ee kuyaala Minnesota waxay kuxiran yihiin fursado loo dhan yahay oo loo siman yahay qof walba. "
McKnight's Barnaamijka farshaxanka wuxuu hadda u kobciyaa qorshe waxbarasho oo ku saabsan sinnaanta jinsiyadda taas oo ay ku jirto falanqayn adag oo ku saabsan deeqdayada iyo sidoo kale faham balaadhan oo ku saabsan qaabdhismeedka qaabdhismeedka ee gacan ka geysta kala duwanaanshaha taageerada fannaaniinta midabada iyo farshaxanka farshaxan ee aasaasay oo ay hoggaamiyeen dadka midabka leh. Sanadkii la soo dhaafay, barnaamijka McKnight Arts wuxuu u xilsaaray Jaamacadda Minnesota Xarumaha Magaalooyinka iyo Gobollada (CURA) si ay u qabtaan wada sheekeysiyo isdaba-joog ah oo ay la yeeshaan 25 farshaxan oo midabo ah oo ku yaal Magaalooyinka Twin Cities. Warbixinta, ayaa xaq u leh Haa iyo Maya: Wadahadal Ku saabsan Ku Dhaqanka Farshaxanka ee Midabka Cimilada, dukumiintiyo barashada iyo talooyinka ka soo baxa wadahadalka. Wadahadalkan ayaa caddeeyay in hawsha farshaxanadan faraha badani ay ka soo jareen waayo-aragnimadooda noloshooda iyo in farsamooyinka farshaxankooda ay badanaa la dabagaley sida falalka wakaaladda iyo nacaybka xoraynta ee loogu talagalay in lagu kobciyo kor u qaadka miyir-bulsheedka iyo dib-u-abuurka beesha. Sanado badan, Barnaamijka McKnight ee Faransiiska iyo barnaamijyada Gobolka iyo Bulshooyinka ayaa maalgeliyey CURA Barnaamijka Iskaashatada Iskaashatada Deriska ah, samaynta deeqda shaqsiyaadka khaaska ah ee ka shaqeynaya beelaha midabka iyo kuwa dakhligoodu hooseeyo ee raba inay abuuraan mashaariic lagu horumarinayo dhismaha beesha, horumarinta iyo dib-u-kicinta iyada oo la xoojinayo kor u qaadista sinnaanta.
Dabbaalida Qabashada Bulshada
Marka aan sii socono hawshaan, waxaan qabaa inay muhiim tahay inaan sidoo kale u dabaalno guulaha. Dhawaan, Saint Paul Almanac iyo Ananya Tance Theater dabaaldega sanadlaha 10-sano. Masraxa Penumbra ayaa dabaaldegaya xilli-ciyaareedkii 40-aad. Mu Farshaxanka iyo Teatro del Pueblo ayaa u dabaaldegi doona sannad-guuradoodu 25-naad sannad-dugsiyeedka 2017-ka. Waxaan helaa dhiirigelin ku saabsan koritaanka iyo abaalmarinta abaalmarinta Farshaxanada isboortiga iyo kartida wanaagsan ee hoggaan cusub Guthrie iyo Farshaxanka Intermedia. Machadka McKnight wuxuu ahaa mid muddo dheer taagan oo sharaf leh oo ka mid ah ururadaas.
Waxa kale oo aan ku dhiirrigeliyay fannaaniinta iyo ururada farshaxanka kuwaas oo aan sugeynin ogolaansho si ay u abaabulaan, si ay u abuuraan forumyo, shabakad, iyo in la abuuro, la helo, lana wadaago khayraadka. The Tijaabooyinka Tijaabada Midabada Midabka maskaxda ku hayaan. Waxaan fiiro gaar ah u leeyahay qaababka cusub ee kaqeybqaadashada bulshada iyo bixinta dhacdada Xarunta Wakaaladaha. Qaran ahaan, waxaan ku faraxsanahay shaqada weyn ee ka dhacaya in ay horumariyaan hoggaamiyeyaal badan oo ka socda beelo kala duwan, si loo kordhiyo taageerada dhaqameed, si loo horumariyo hababka kale ee taageerada, iyo horumarinta shabakadaha. The Machadka Dhaqanka ee Cilmi-nafsiga, iskaashi u dhexeeya Ururka Qaranka ee Farshaxanka iyo Dhaqamada, Rootsyada Kale, iyo Sanduuqa Dadweynaha Kowaad, waxay qabtaan shaqo fiican. ArtChangeUS waxa uu ku baaqayaa in wax laga beddelo qaabka dadweynaha ee ka dhacaya dalkeenna iyo ka shaqeynta sidii loo horumarin lahaa shabakadaha cakiran iyo sidoo kale fursado iskaashi oo u dhaxeeya farshaxanada, dhaqdhaqaaqayaasha, culimada, iyo dhaqdhaqaaqa dhaqameedka. Waxaa jira shaqo badan oo wanaagsan oo socda.
Farshaxanada Qaadista Waxqabadka, Ku Dhexdhexaadinta Nalka Fudud ee Iskuduwaha
Shaqadayda fanka, waxaan ku jiraa hadafka hagaajinta tayada nolosha dadka Minnesotans ah. Marka ay timaaddo sinnaan la'aanta dhismaha iyo nidaamyada ilaaliya oo ku sii waaraya sinnaan la'aanta farshaxanimada iyo wixii ka dambeeya, deeq-bixiyayaashu waa shaqo sii socota. Shaqada sinaanta jinsiga waxay ina siinaysaa fursad aan si qoto dheer ugu galno qiyamka aan udhisanno oo aan u qalabeyno shaqada adag ee lagama maarmaanka u ah horumarinta bulshooyinka caddaaladda iyo kuwa waari kara. Waxaan u baahannahay inaan wax dheeraad ah qabano si aan wax u dhageyno, wax uga barano, iyo inaan taageerno shaqada jaaliyaddeena beesha. Gudaha iyo ka baxsan farshaxanka, farshaxanada midabka ayaa si firfircoon u shaqeynaya si ay u iftiiyaan iftiinka kala duwanaan la'aanta saameynta bulshooyinkooda. Hirgelinta hal-abuurka iyo fikradda ah in la kashifo faham aad u adag oo ah bini-aadamnimadeena iyada oo hodantinnimo iyo qadarinteeda, qaar badan oo ka mid ah farshaxan-yahannadan ayaa sidoo kale tallaabo ka qaadaya sidii ay ula dagaalami lahaayeen cadaadiska iyo bani-aadminnimada ee xaaladda. Fannaanyahanadani ma ahan kaliya muraayad kor u qaadaya bulshada. Waxay ka shaqeynayaan dib-u-heshiisiinta bulshadeena annagoo ku dhirrigalinaya fursadaha hal abuurka iyo dib-u-soo-nooleynta dimuqraadiyadda iyo annaga oo naga horjoogsanaya inagoo raacno ballanqaadkeena "tayada nolosha" iyo "xoriyad iyo caddaalad" dhammaan.